Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybta Afraad - Boga Wise Man
December 10, 2020 qawdhan
Markeliya ayaa Ethiopia qiiqday sanadkii 2018-kii, kadib markii mudaharaadyo badani ragaadiyeen muddo laba sano ka badan oo ay wadeen qoomiyada ugu tirada badan Ethiopia ee Oromada. 2-dii April ayaa waxa Ethiopia dooratay Raysal Wasaare Abiy Ahmed oo qoomiyad ahaan kasoo jeeda Oromada. Abiy Ahmed waxa da’diisu ahayd markii uu qabsaday Ethiopia 41 sano.
Abiy waxa uu markiiba la yimid siyaasad in badan lagu shiilayay xarumaha siyaasadaha caalamiga ah lagu daraaseeyo sida Chatham House ama Xarunta Baadhista Arrimaha Caalamiga ah ee Ingiriiska. Siyaasadan oo ay ku lug leeyihiin wadamada Carabtu, gaar ahaan Sucuudigu waxa ay tahay in la mideeyo wadamada Geeska Afrika. Wadamada Soomaaliya, Djibouti, Eriteria iyo Ethiopia in la mideeyo oo Ethiopiana maamusho. Isla markiiba waxa uu Abiy soo afjaray cadaawadii u dhaxaysay Eriteria iyo Ethiopia. Talaabadii kale ee uu qaaday waxay noqotay in uu la heshiiyo Madaxweyne Farmaajo kaasoo uu ka saxeexday in ay Somalia ka mid noqoto wax ay ugu yeedheen Isdhexgalka Geeska balse ah farsamadii aan hore u sharaxay ee in Ethiopia liqdo dalalka kale ee Geeska kula yaal.
Markeliya ayay madaxda Somaliland ku baraarugeen in Abiy Ahmed ka duwan yahay madaxdii hore ee soo martay Ethiopia oo uu si toos ah ula safan yahay dawlada Federaalka ee Soomaaliya. Maadaama Somaliland iyadu hore u ogolaatay inay wadahadalo la gasho Soomaaliya oo weliba ku guulaysatay in Xasan Sheekh Maxamed iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke u saxeexaan heshiisyadii saldhiga iyo dekeda Berbera, waxa adkaatay sidii Somaliland beesha caalamka kiis la fahmi karo oo qadiyada Somaliland sharaxaya ula tegi lahaayeen.
Dadka Somaliland, Alle ha dhawree, oo ah dad feejigan ayaa markeliya kuwar helay Madaxweyne Muuse iyo Madaxweyne Farmaajo oo ku kulmay Addis. Xaraaradii iyo heer kulkii shucuurta Somaliland ayaa hawada maray. Hadana waxa ku xigay in Abiy Axmed yidhaahdo aniyo Farmaajo oo wada socona ayaa iman doona Hargeysa taas oo dawlada Somaliland ka diiday. Waxa kusii xigay shirkii Somaliland iyo Somalia ee ka dhacay Djibouti. Shirkan ayaa isna waxa uu sii tirtiray wax Alle wixii rejo ahaa ee laga qabay aqoonsiga Somaliland. Shirka Djibouti waxay dawlada Somaliland ogolaatay in hawada Somaliland laga maamulo Muqdisho, iyo in ay furantahay is dhexgalka bulshada qaybaheeda kala duwan sida fanaaniinta, dhalinyarada, ciyaaraha IWM.
Somaliland wadankii ay abaalka ka sugaysay ee dekedeedii ku wareejisay ee Imaaraadka kama aysan helin wax taageero ah. Inkastoo uu dhawr jeer tegay Madaxweyne Muuse hadana waxa maalin la weydiiyey Wasiir Sacad Cali Shire su’aal ahayd waxa ku dhacay in aan DP World ama Imaaraadku kasoo bixin balamahoodii ahayd dhisida iyo caawimada cisbitaalada Berbera, waxa uu Sacad ku jawaabay “Balanqaadyo ayay ahaayeen waxaasi ee heshiis may ahayn markaa balanqaadyada way ka noqon karaan”.
Wakhtigan aan qorayo maqaalkan waxa labadii hogaamiye ee Soomaaliya iyo Ethiopia ku mashquulsan yihiin xiisado ka oogan gudaha dalalkooda. Abiy Axmed waxa uu soo gabagabayn rabaa sida ay u egtahay dagaalkii uu ku qaaday TPLF iyo Tigreega. Halka Soomaaliya ay galayso doorasho la filayo in Farmaajo kusoo baxo oo markale noqdo Madaxweyne.
Lasoco qaybta danbe oo aynu ku eegi doona mustaqbalka Somaliland iyo ifafaalihiisa….
Djbibouti doorasho Ethiopia Siyaasad Somalia Somaliland
Previous Post Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybta Saddexaad
Next Post Xikmadii Maamul Ee Cumar Binu Khadaab (Radiyallaahu Canhu)